Xeerka warbaahinta Puntland oo maantay lagu sameeyay dib u eegid rasmi ah. – Radio Daljir
Maajo 11, 2013 9:28 b 0
Garow, May, 09, 2013 – Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland ayaa maanta waxa ka furmay kulan dib loogu eegayo xeerkii qabyada ahaa ee Saxaafada Puntland oo dhamaadkii sanadkii tagay soo diyaarisay wasaarada Warfaafintu.
Kulankan waxaa ka soo qaybgaley xubno ka socday wabaahinta Puntland kana kala yimid dhamaan gobollada, Masuuliyiinta Wasaarada Warfaafinta Puntland, Ururka Saxafiyiinta Puntland ee MAP, Masuuliyiinta daladda ururada aan dawliga ahayn PUNSAA iyo khuburo dhinaca Saxaafada ah oo aqoon iyo khibrad dheeraad ah u leh sharciyada warbaahinta.
Xoghayaha guud ee ururka Saxafiyiinta Puntland ee MAP Burhaan Axmed Daahir oo isna kulankan ka hadlay ayaa sheegay in xeerkani manta loo fadhiyo uu yahay xeerkii ay dawladu qaadan lahayd ee mudada soo jiitamayay, wuxuuna saxafiyiinta iyo khuburada kale ee shirkan fadhida ku dhiirigaliyay in ay kaalintooda muujiyaan si qoto dheerna u lafa guraan qodobada uu xeerkan ka kooban yahay.
Burhaan wuxuu tilmaamay in warbaahintu ay tahay qorayaasha xeerkan lagana doonayo in ay soo saaraan xeerka ugu waraagsan ee aduunka si loogaga daydo.
Wasiirka warfaafinta, Isgaarsiinta, Hidaha iyo Dhaqanka ee dawlada Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo shirkan si rasmi ah u furay ayaa qalinka ku duugay in laga doonayo shirkan sidii looga miradhaliyo ,xeer wanaagsana loo soo saaro in maskaxda la shiilo si isku mid ahna looga wada qayb qaato dooda.
Wasiirku wuxuu sheegay in xeerkani laga doonayo in uu noqdo mid qof walba oo reer puntland ah dantiisa iyo xuquuqdiisa uu daboolo, asaas wanaagsan hadii loo dhigana wuxuu wasiirku sheegay in Puntland looga dayan doono marka qaybaha kale ee Somalia ay shuruuc cayn kan ah samaysanayaan.
Kulankani waxaa soo qaban qaabiyay Daladda PUNSAA, wuxuuna socon doonaa mudo labo maalmood ah oo qayb ka ah dadaal mudo 6 bilood kor u dhaafaysa ay PUNSAA ugu jirtay in saxaafada iyo wasaarada warfaafinta la isku keeno si ay xeerkan oo muran badan dhaliyay mawqif midaysan ay uga wada qaataan.